Nchịkọta Weebụ Pịa na-eme ya Ọzọ! | Martech Zone
Saturday, July 21, 2007 Saturday, July 21, 2007 Douglas Karr
Nchịkọta Weebụ Pịa esetịpụrụ site na nnukwu atụmatụ ọzọ!
Nke a bụ web nchịkọta ngwugwu na-aghọ ngwa ngwa ngwugwu m hụworo - ọkachasị maka ndị na-ede blọgụ na ndị na-ebi akwụkwọ weebụ. Dashboard nwere ihe dị oke egwu dị egwu - niile site na otu ibe.
Nke a bụ New Dashboard:
Jul 21, 2007 na 9:17 PM
you na-agbaso ihe nke blọọgụ ha gbasara ya Doug? .. ụfọdụ anaghị enwe obi ụtọ na ya… maka ụfọdụ ụtụtụ Satọdee na-agụ LOL
Jul 21, 2007 na 9:31 PM
Enwere m, Steve. O juru m anya. Dịka Onye njikwa ngwaahịa, ana m ahụ mmeghachi omume a oge ọ bụla mgbe anyị 'melite' ngwaahịa ma ọ bụ hapụ ọhụụ ọhụrụ. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ achọghị mgbanwe. Ọ bụrụgodi na ọ n’aga n’ihu.
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị: ndozi ewepụghị ọ bụla arụmọrụ! Ọ tinyekwuru ya!
Jul 23, 2007 na 3:18 PM
Amalitere m iji Clicky izu ole na ole gara aga, obi dịkwa m ezigbo ụtọ na ya!
Ọ dị mma karịa Google Analytics 🙂
Ọkt 24, 2007 na 12:47 PM
Ọ dị onye ọ bụla chọpụtara data dị iche iche nke Clicky vs. Google Analytics na-eweghachi n'akụkụ site n'akụkụ ule? Anyị nwere weebụsaịtị nke onye ahịa nke etinyere Clicky n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-egosi data dị iche karịa Google. Dịka ọmụmaatụ, n'otu ụbọchị Google gosipụtara ndị ọbịa pụrụ iche 18, na Clicky gosipụtara 48 n'otu ụbọchị ahụ, nke a abụghị otu oge. Ebe ọ bụ na o yikarịrị ka otu ngwungwu nchịkọta agaghị akọ akụkọ karịa nke ọzọ ga-emepụta data amamịghe, ekwesịrị m ịpị Clicky nwere data ziri ezi mana enweghị m ike ịchọpụta ihe kpatara ọdịiche ahụ ji dị.
Ọkt 25, 2007 na 11:03 AM
Josh, gịnị banyere ọnụọgụ ndị ọzọ, dị ka nleta na omume, ndị ahụ dabara nso? A na-agbakọ ndị ọbịa anyị pụrụ iche site na adreesị IP ugbu a. Ọ bụ ezie na enwere ike ịmekwu ya na kuki yana ihe ọ bụghị, dịka ụfọdụ ngwa ndị ọzọ na-eme, enweghị ụzọ dị egwu iji nweta ya 100%. (Usersfọdụ ndị ọrụ gbanyụọ kuki, wdg).
Ekwenyere m na ogo ngwaahịa m, mana ọ bụrụ na ihe ọ bụla m ga-eche na ọnụọgụ Google ziri ezi karịa nke anyị. Ha nwere iri puku kwuru iri puku sava na-agba ọsọ nyocha, kesaa ụwa niile. Ebe anyị bụ naanị obere ụlọ ọrụ nwere ihe dịka sava 10, ha niile n'otu ebe n'ime US. O siri ike ịlụ ọgụ na nke ahụ, na-enweghị ọtụtụ ijeri na ụlọ akụ.